बाराक ओबामाबारे हस्पिटलबाट आयो नमिठो, के छ अवस्था ? — Imandarmedia.com
बाराक ओबामाबारे हस्पिटलबाट आयो नमिठो, के छ अवस्था ?
काठमाडौं। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ । पूर्व राष्ट्रपति ओबामाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत् जानकारी दिँदै आफूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको बताएका हुन्।
मेरो टेस्टमा भर्खरै कोरोना पोजेटिभ देखियो। उनको ट्विटमा उल्लेख छ, ‘केही दिन देखि घाँटी दुखिरहेको थियो, तैपनि म तन्दुरुस्त नै छु। उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि उनका साथी तथा हालका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसमेत चिन्तित बनेका छन्।
पूर्व प्रथम महिला मिसेल ओबामा र आफू दुवैले कोरोनाविरुद्ध बुस्टर डोज खोप लगाइसकेको उल्लेख गर्दै ओबामाले अरुलाई पनि खोप लगाउन आह्वान गरे।
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण घट्दै जाँदा अमेरिकामा जनस्वास्थ्य मापदण्डहरू पनि विस्तारै खुकुलो पारिँदै लगिएका छन् । पछिल्लो साता औसतमा ३५ हजार नयाँ संक्रमित देखिएका थिए।
जोन्स होप्किन्स विश्वविद्यालयको आँकडाअनुसार अमेरिकामा कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म ९ लाख ६७ हजार भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
त्यस्तै, अमेरिकाको संघीय रोग नियन्त्रण एवम् रोकथाम केन्द्रका अनुसार ७५ प्रतिशत भन्दा धेरै अमेरिकीहरूले पूर्ण खोपको मात्रा पाएका छन् भने ४७ प्रतिशतले बुस्टर डोज पनि लगाइसकेका छन् । यता भारतमा कोरोनाभाइरसबाट दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनप्रति दिन घट्दै गइरहेको छ।
भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप दुई हजार ५०३ सङ्क्रमित भएका केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले सोमबार जानकारी दिएको छ। भारतमा कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको अहिलेसम्म पाँच लाख १५ हजार ८७७ को मृत्यु भएको छ।
तीमध्ये २७ जनाको पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएको हो। ती मध्ये केरला राज्यमा मात्र १५ जनाको मृत्यु भएको समाचारमा जाइएको छ। भारतमा हालसम्म कूल कोरोना सङ्क्रमितको संख्या चार करोड २९ लाख ९३ हजार ४९४ रहेको समाचारमा जनाइएको छ।
योसँगै भारतमा अहिले सक्रिय सङ्क्रमितको संख्या भने ३६ हजार १६८ रहेको अधिकारीले जनाएका छन्। सक्रिय सङ्क्रमितको यो संख्या कूल सङ्क्रमितको शून्य दशमलब ८ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा चार हजार ३७७ कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमणमुक्त भएका छन्। एउटै अवधिमा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्याभन्दा सङ्क्रमणमुक्त भएकाको सङ्ख्या धेरै भएकाले सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि घट्दै गइरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
भारतमा अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमणमुक्त भइसकेकाको सङ्ख्या चार करोड २४ लाख ४१ हजार ४४९ पुगेको छ। भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मुक्त दर ९८ दशमलब ७२ प्रतिशत रहेको समाचारमा जनाइएको छ।
गत आइतबार एकै दिनमा भारतमा पाँच लाख ३२ हजार २३२ को कोरोना परीक्षण गरिएको जनाइएको छ। भारतमा कोरोना शुरु भएबाट हालसम्म ७७ करोड ९० लाखभन्दा बढी व्यक्तिको कोरोना परीक्षण भइसकेको छ।
भारत सन् २०२१ को जनवरी १६ बाट कोरोना भाइरविरुद्ध खोप अभियान शुरु भएको थियो। सो समयबाट हालसम्म कोरोना भाइरसविरुद्धको एक अर्ब ८० करोड १९ लाखभन्दा बढी डोज खोप लगाइएको छ।
तेस्तै, चीनमा मंगलबार एकै दिन ५ हजार २८० जना कोभिडका नयाँ संक्रमित देखिएका छन्। यो संख्या चीनमा दुई वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै भएको नेसनल हेल्थ कमिसन एनएचसीले जनाएको छ।
चीनमा देशव्यापी ओमिक्रोन संक्रमणका कारण नयाँ संक्रमितको संख्या पनि रेकर्ड तोड्ने गरी दिनहुँ बढिरहेको छ। एनएचसीका अनुसार उत्तरपूर्वी प्रान्तमा ३ हजार भन्दाबढीमा संक्रमण देखिएको छ।
चीनले कोभिडविरुद्ध ‘शून्य सहनशिलता’को नीति अप्नाएको जनाउँदै आएको छ। कठोर प्रतिबन्ध र स्वास्थ्य मापदण्डका बाबजुद पछिल्लो दुई सातामा यसअघिका रेकर्ड तोड्ने गरी संक्रमितको संख्या देखिएको छ।
यसअघि कोभिड संक्रमण बढेपछि उत्तरपूर्वी सहर चाङ्गचुन र १ करोड ७० लाख जनसंख्या भएको शेनझेन सहरमा यसै साता लकडाउन घोषणा गरिएको थियो।
शेनझेनको दक्षिणी टेक हबले सम्पूर्ण बासिन्दालाई २० मार्चसम्म घरभित्रै बस्न भनिएको छ। रोकथाम र नियन्त्रणलाई समयमै सशक्त नबनाइए कोभिड सजिलै समुदायस्तरमा फैलिन सक्ने विज्ञहरुले चेतावनी दिँदै आएका छन्।
संक्रमणका कारण सांघाईमा विद्यालय र उत्तरपूर्वी शहरहरु बन्द छन्। चीनका १८ ओटा प्रान्त ओमिक्रोन र डेल्टा भेरियन्टको क्लस्टरसँग जुधिरहेका छन्। चीनमा सर्वप्रथम सन् २०१९ को अन्त्यतिर भाइरस देखिएको थियो।